” blackprince72 ” ၏ post အား ပြန်လည်ဖြေရှင်း ခြင်းနှင့် WellcoM သုံးစွဲသူ များသို့ပန်ကြားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ” blackprince72 ” ၏ post အား ပြန်လည်ဖြေရှင်း ခြင်းနှင့် WellcoM သုံးစွဲသူ များသို့ပန်ကြားခြင်း
” blackprince72 ” ၏ post အား ပြန်လည်ဖြေရှင်း ခြင်းနှင့် WellcoM သုံးစွဲသူ များသို့ပန်ကြားခြင်း
Posted by Bloodseeker on Aug 29, 2011 in Copy/Paste | 19 comments
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်က WellcoM ရဲ့ Service သမား တစ်ယောက် ပါ။ အရင် ဆုံးအနေ နဲ့ WellcoM Service မှ အ မှား အယွင်းများ ရှိခဲ့ရင် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
WellcoM phone တွေ ရဲ့လိုင်းဆွဲအား က ကောင်း ပါ တယ် ။ အခြား phone အတော် များများ နှင့် ယှဉ်လို့ရ ပါတယ်။ ထူးထူး ခြားခြား ညံတယ် ဆို တာ မျိုးတော့မ ရှိ ပါ ဘူး ခင်ဗျာ။
Main Circuit Board နှင့် LCD က Phone တစ် လုံးရဲ့အဓိက အစိတ် အပိုင်း များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများရဲ့ဈေးနှုန်း က Phone တစ်လုံးရဲ့ ၄၀% မှ ၅၀% ထိ ရှိတတ် ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့Wellcom Mobile မှာ ဆို ရင် Phone Model အပေါ် မူတည် ပြီး အပို LCD များ၏ဈေးနုန်း ဟာ ၅၀၀၀၊၆၀၀၀ မှ ၅၅၀၀၀ အထိ ရှိ ပါတယ်။ Multi Touch Screen ပါ LED LCD Display တစ်ခု ရဲ့ ဈေး က ၅၅၀၀၀ ကျပ် ရှိ ပါတယ် ၊ ဒါ ဟာ အဆိုပါ LCD ပါရှိသော Phone ဈေးနုန်း၏ ၂၀% ပဲ ရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Service ပိုင်း မှ လည်း LCD နှင့် Main Board မှ လွဲ ပြီး ကျန် အစိတ် အပိုင်း များ ကို Free Service ပေး နိုင် အောင် စီစဉ် နေ ပါ တယ် ခင်ဗျာ။
အပို အစိတ် အပိုင်းများ နှင့် ဈေး နှန်းများ ကို လည်း မြန်မာ ပြည်နှင့်ကိုက်ညီ မှု ရှိ အောင်စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
WellcoM Phone ပိုင်ဆိုင်ထားသော သုံးစွဲသူများ အနေ နဲ့ အစဉ် မပြေ မှု့များရှိ ခဲ့ပါက WellcoM ရုံးချုပ် Phone – 01 534 644 သို့ ဌင်း ၊ Country Manager Ph – 09 502 9494 , 09 730 83712 သို့ ဌင်း ဆက်သွယ် ပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Service အနေနဲ့လည်း WellcoM Phone များကို Service Charge မယူပဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေ ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဝေဖန် အကြံပြု့ပေးသော blackprince 72 နှင့် တကွ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး အထူးနင့်နာခဲ့ရသူများရှိ ခဲ့ပါ က Country Manager ၏ Phone – 09 502 9494 သို့ ဆက်သွယ် ပေးပါရန် နှင့် အ ထောက် အထား ခိုင်လုံ ပါ က Refund ပြန် လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
WellcoM သုံးစွဲသူ များ ၊ ဝေဖန် အကြံပြု့ပေးကြသူများ နှင့် Site Admin Teams မှ လူကြီးမင်း များ ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိလျှက်…….၊၊ ။ ။ ။
LinnHtut LinnHtut has written 1 post in this Website..
View all posts by Bloodseeker →
ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်.. တယောက်တပေါက် အပြန်အလှန် ဆဲ တာထက် ဒီိလို ပိုစ်တင်တာ သဘာဝ ကျတယ် သဘောလည်းကျတယ်။ ပညာရှိနည်းနဲ့ ရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပဲ.. ဒီရက်ပိုင်း အပြိုင် ဆဲ နေကြတာ များတော့ စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ တော်တော် စိတ်ညစ်နေတာ.. ဖြေရှင်းနည်း ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
ပစ္စည်းမှန် တာဝန်ယူမှုမှန် ဈေးနှုံးမှန်
ကျေး ဇူးပါ ခင်ဗျာ ။ အားလုံး အတွက် အဆင် ပြေ အောင်ကြိုးစားနေ ပါတယ် ခင် ဗျာ ။ unclegyi1974 ရဲ့ comment ကို လေးစားပါတယ် …..
အခုလိုမျိုးပြေလည်မှုမျိုးရှာတွေ့ ပါစေ လို့ သံတွဲသားအဖွဲ့ အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ရွာကတော့ ဆူနေပီ သူကြီးရေ။
ပြန်လည် ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇျးတင်ပါတယ် ။
ကျွှန်တော် လဲ Service သမား တစ်ယောက်ပါ ။
LCD က Phone တစ် လုံးရဲ့အဓိက အစိတ် အပိုင်း များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများရဲ့ဈေးနှုန်း က Phone တစ်လုံးရဲ့ ၄၀% မှ ၅၀% ထိ ရှိတတ် ပါတယ် ဆို တော့ Nokia E71 ဆို 160,000 ks ပါခုပေါက်ဈေး က ။သူ့ LCD က ၇၀၀၀ ပဲ ရှိပါတယ် ။40% ဆို 64000 ks လောက် ရှိမှာပေါ့ ။nokia E72 က 210,000 ks ပါ ။ သူ့ LCD က ၇၀၀၀ လောက် ပဲရှိတာပါ ။40% ဆို 84000 တောင် နော် ။nokia 5800 ဆို 15000 ks ပါပဲ ။40% ဆို ၇၂၀၀၀ ks ပါ။လက် ခ ၅၀၀၀ က နေ ၁၀၀၀၀ ကြားပေါင်း ပါအုံး ။၂၅၀၀၀ ks ပဲ ကျတယ် ။၀ယ် ယူ သူတွေဟာ ဖုန်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီး သိ သူ များပါသလို ၊မသိသူများလဲပါပါတယ် ။ဖုန်းပြင် ဖူး တဲ့ သူဆို သိမှာ ပါ ။ဘယ်လိုမှ 40% မရှိ ဘူးဆို တာ ။ ပုတ်ခတ် ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ ။Service Charge မယူပဲ ဘူးဆို တာဟုတ် ပါပြီ ။အရင်း က ဘယ် လောက်ရှိ လဲ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး ။အကြံပေးချင်တာ တော့ အကုန်စုံစမ်းပြီး မှ ဈေး ကို ပြောစေ ချင် ပါတယ် ။အပြင် ဆိုင်တွေ က ကော မပြင်ရတော့ ဘူးလား ။Service Charge မယူပဲ ပြင်နေ ရမှာ လား ။wellcom တွေအပျက်များ တယ် ဆို တာ Service လုပ်တဲ့ ဆိုင်တွေ အသိဆုံး ပါ။ တရုတ် နဲ့ ကွာလတီ အတူတူလောက် ပါပဲ ။၀ယ် ယူမည့် သူများ ကို လိမ်ရန် မသင့်ပါ ။လိမ်လည် ခြင်း က ခဏတာ ပဲ ကောင်း နိုင်ပါတယ် ။အသစ် ၀င် တာဆို တော့ မသိလို့ နေမှာပါ ။ နံမည် ရ ချင်ရင် စေတနာ ထား ပါ။ပိုက်ဆံ ကို ပထမ မထားပါနဲ့ ။အသစ် ပေါက် တာဆို တော့ အားလုံး ကို ဈေးချိုသာစွာ လုပ်ပေး ပါ။
မည် သူ့ ကိုမှ ရည်ရွှယ်ပြောဆို ပုတ်ခတ် ခြင်း မရှိပါ ။သတိထားရန် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၀ယ် ယူမည့် သူများ ကို လိမ်ရန် မသင့်ပါ ။လိမ်လည် ခြင်း က ခဏတာ ပဲ ကောင်း နိုင်ပါတယ် ။အသစ် ၀င် တာဆို တော့ မသိလို့ နေမှာပါ ။ နံမည် ရ ချင်ရင် စေတနာ ထား ပါ။ပိုက်ဆံ ကို ပထမ မထားပါနဲ့
အကို Comment ပေးတာ ကျွန် တော် ဘာ ပြန်ပြောရမှန်းတောင် မ သိ တော့ ပါ ဘူး …..။။
WellcoM Mobile က Housing Brand ပါ ။ အ ကို ယှဉ် ပြ သော Nokia က International Brand ပါ အကို။
အကို့ အနေ နဲ့ Customer ဘက် က နေ Nokia ကို Suggestion ပေး တာ အ ကို မှန် ပါ တယ် ။
International Brand အ တော် များ များ ရဲ့ အပို အစိတ် အပိုင်း ကို China မှ ထုတ် ပေး နိုင် ပါ တယ် ..
အဲ့လိုပြောတာ လက်ခံ ပါတယ်။china က အပိုအစိတ်အပိုင်း က မကောင်း လို့ လား ? ယိုးဒယား က ထုတ်တာ ပိုကောင်း တာ လား ? service သမားအနေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ခုဆို Nokia ,sony , china handset ကအစပြင် ရင် တရုတ် အပိုအစိတ်အပိုင်းပဲထည့် တော့ တယ် ။ဘာဖြစ်လဲ ?ပျက်လွယ် လား? No ပါ ။ဈေးချိုတယ် လေ။ ကွာလတီ တူပြီး ဈေးကြီးတာကို ရှင်းပြပါ အုံး။ကျွှန်တော် က အကြံပေးတာပါ ။ ဖုန်းက ဈေးနည်းပါတယ် ။ပြင်ဖို့ဈေးကြီးနေ တော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ China handset ဆို ၄၀၀၀၀ ဆို function စုံစုံရပါပြီ ။ အားသွင်းကြိုး ၊ဓာတ်ခဲ ၊မိုက် ၊စပီကာ ၊ Touch ပြား စတာတွေဝယ် ယူနိုင်ပါတယ် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာပေါ့ ။ဒီထက်ပိုဖြစ်ရင် လွှတ်သာ ပစ်လိုက်တော့ တန်မှ မ တန်တာ ။ခုလာ တဲ့ wellcom တွေ က ဓာတ်ခဲ က ဘယ် လောက် မ မရှိသေးဘူး ဖောင်းပြီ ။ဖုန်းအောက်ကျရုံနဲ့ ပျက်တယ် ။LCD ကွဲ တယ် ပြန်မပြင်နိုင် လို့ အသစ် ၀ယ် ရတယ် ။လပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ် ။ကောင်းတယ် မကောင်း ဘူး က သုံးတဲ့ သူပဲ သိ မှာပါ ။သုံး လို့ မကောင်း မှတော့ အသစ်ပြန်ရမှာမှ မဟုတ်တာ ။ပြင်ရင် ပိုက်ဆံ ကုန်အုံးမယ် ။ဈေး သက် သာ အောင် အရင် လုပ်ပြီးမှ အပို အစိတ်အပိုင်း တွေ သွင်းသင့် တယ် ။ပြီး တော့ ဆိုင် တိုင်း ပြင်နိုင် အောင် ဈေး ကို အတူတူ ထားသင့် တယ် ။လက် ခ မယူပဲ လုပ် တာ ကို မပြောပါ ဘူး ။ကျန်တဲ့ ဆိုင်တွေ က မပြင်ရတော့ ဘူး လား ? ၀ယ် သူ အဆင်ပြေ မယ် ထင်လား ။nokia မှ မဟုတ်ပါဘူး samsung & HTC & I phone တို့ လဲ ကောင်း ပါတယ် ။samsung ဆို ၁၆၀၀၀၀ ဆိုgalaxy5(android OS )ဖုန်း touch သုံးလို့ ရပါတယ် ။တော်တော် လဲ ကောင်း တယ် ။wellcom သုံးမလား samsung တို့ ဘာတို့ Brand သုံးမလား ၀ယ် သူ ရွှေးပါလိမ့် မယ် ။မည်သူမဆို မိမိ တို့သာ အကောင်းဆုံး ဟု ကြေညာမှာပဲ ။ဘယ်သူမှ မကောင်းဘူးပြောမှာမဟုတ်ဘူး ။အဲ့ လိုထက် မလိမ်ပဲ ဒါကဒီလို ရှိတယ် ။ပြင်ရင်ဈေးကြီး ၊အပိုမလာရင် မလာဘူး ၊ပြင်လို့ မ ရရင် မရဘူး ပျက်လွယ်တယ် ၊ ရှင်းပြပြီး မှရောင်းသင့် တယ် ။၀ယ်သူ ကြေနပ် လို့ ၀ယ် တာ ဆို တော့ ပျက်လဲ နံမည် လဲမပျက်တော့ဘူးပေါ့ ဗျာ။အာမခံ တွေလဲ ပေးမယ်ဆို ရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် လဲပေးနိုင်မှ ပြောပါ ။သုံးစွဲ သူ အမှားကြောင့် ဥပမာ – ရေ၀င် တာ ၊မီးလောင်တာ ၊အောက်ကျတာ ကလွဲ ပြီး အကုန် ပြန်လဲ ပေးနိုင် ရမယ် ။စစ်ပြီး မှ လက်ခမယူဘူး ပြင်ပေးမယ်ဆိုတာတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ ။ ဘာပျက်ပျက် ၀ယ်သူ မသုံးတက် လို့ လို့ မပြောနဲ့ ပေါ့။battery ကို လဲ ၆လ (သို့) တစ် နှစ်အတွင်း ပျက် ရင် ဖောင်း ရင် လဲပေး ရမယ် ။ဘယ်သူ မှ အမြတ်မကျန်ပဲ စီးပွားရေးမလုပ်ဘူး ။ငွေရင်းနိုင် လို့ လုပ် တာ မဖြစ်စေနဲ့ ပေါ့ ရေရှည် ကြည့် ပါ ။
ကြည့်ရတာ ဒီမလဲ မပြေလည်နိုင်သေးဘူးပဲ။
ဒီပို့စ် ကိုကြိုဆိုပါတယ် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြ ၊ စာဖတ်သူက သူအသိဥာဏ်နဲ့ ချင့်ယုံ ဒါမျိုး ဒီရွာထဲမှာ များများထွန်းကားစေချင်ပါတယ် ဒီကတဆင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထိ လွတ်လပ် ရိုးသားစွာ ငြင်းခုန်နိုင်ကြပါစေ ..
(Nokia E71 ဆို 160,000 ks ပါခုပေါက်ဈေး က ။သူ့ LCD က ၇၀၀၀ ပဲ ရှိပါတယ် ။40% ဆို 64000 ks လောက် ရှိမှာပေါ့ ။nokia E72 က 210,000 ks ပါ ။ သူ့ LCD က ၇၀၀၀ လောက် ပဲရှိတာပါ ။40% ဆို 84000 တောင် နော် ။nokia 5800 ဆို 15000 ks ပါပဲ ။40% ဆို ၇၂၀၀၀ ks ပါ။လက် ခ ၅၀၀၀ က နေ ၁၀၀၀၀ ကြားပေါင်း ပါအုံး ။၂၅၀၀၀ ks ပဲ ကျတယ်)
ဟိုတလောလေးကမှ Nokia Music Express မီးမလင်းလို့ LCD လဲတာ ၃၅၀၀၀၀ ပေးရတယ်။ များသွားပြီလား မသိဘုး။
ဲ ပြီးတော့ WellcoM Phone touch အဖြူရောင်လေး ၉၅၀၀၀ ဆိုတော့ လှလည်းလှဈေးလည်းမဆိုးလို့ ဝယ်ရမလား စဉ်းစားနေတာ။
LCD လဲတာ ၃၅၀၀၀၀ မကျနိုင်ပါဘူး ။၃၅,၀၀၀ လောက် လုပ်ပါဗျာ ။ဘာ model လဲ မသိဘူး ။များ တယ် ထင်ပါတယ် ။ဘယ်မော်ဒယ် ဖြစ်ဖြစ် ၂၅၀၀၀ လောက်ကအမြင့်ဆုံး ပါပဲ ။မော်ဒယ် အမြင့်တော့မပါဘူးပေါ့ ။Touch ဖုန်းတွေဆိုပို ဈေးကြီးပါတယ် ။Wellcom မ၀ယ် ပါနဲ့ မပြောချင်ပါဘူး။မိမိ စိတ်ကြိုက်ရွှေးချယ်ပါ။ ကျွှန်တော် က သတိပေးပြီးပါပြီ။ china Touch ဖုန်းတွေ ဆို ၅၀၀၀၀ လောက်ဆိုရပါပြီ။Full Touch ပါပဲ။လှလဲလှပါတယ် ။အပို တွေလဲဝယ်လို့ရပါတယ် ။Touch ကလဲ တော်တော် ကောင်းပါတယ် ။touch ကွဲလို့ လဲမယ် ဆို ၁၅၀၀၀ လောက်ပဲရှိပါတယ်။စပီကာ ဆို ၄၀၀၀ ၊ ၅၀၀၀ လောက် ပဲ။မိုက်ဆိုလဲ အဲ့ လောက်ပဲ ။သချာစဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အကောင်းကိုင် စေချင်ပါတယ် ။အကောင်းကိုင် မယ်ဆို samsung ကိုင်စေ ချင်တယ် ။၆၀၀၀၀ လောက် လိုက်ပြီး ကိုင်ပေါ့ ဗျာ။လိုင်းဆွဲအား က Nokia ထက်ကောင်းတယ် ။Android ဆိုတော့ game & application ပေါ ပါတယ် ။လှလဲလှပါတယ် ။၀ယ်မမှားစေ ဖို့ ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းအပေါ် တာဝန်ယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တချို့က စာရွက်ထဲပဲရှိပြီး တကယ့်လက်တွေ့မှာ အမှန်တကယ် ၀ယ်သူများကို မလုပ်ပေးတဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပြီး ရေရှည်ရပ်တည်မှုလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ပစ္စည်းဆိုတာကတော့ အနည်းနဲ့အများ ပျက်တာတွေရှိပေမယ့် မည်သူမဆို စားသုံးသူတွေကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးတွေကို လိုချင်ကြတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိတဲ့ပစ္စည်းကို ကိုယ် အာမခံတော့ ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်း ခိုင်မာမှုရှိလာတာပေါ့ရှင်… ဒါကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေပါပဲ။ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်ခဲ့ရင်တော့ တစ်နှပ်ပဲစားလို့ရမယ့် အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုထက် ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အဲဒီလို ..ဟိုဟာလဲ.. ဒီဟာဖြုတ်အသစ်တတ် လုပ်နိုင်နေမှတော့….
တနှစ် ဥပမာ.. ကျပ်၁သိန်း ကြိုက်တာပျက်.. ကျကွဲ..ရိုက်ခွဲတာမဟုတ်ရင်.. ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမဟုတ်ရင်. ပစ္စည်းအခမဲ့..လက်ခပဲယူပြီး…ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့..။
ဒါမှမဟုတ်.. သုံးစွဲ၍ရသော ပြင်ဆင်ထားတဲ့ refurbished အမျိုးတူပစ္စည်းတခုနဲ့ လဲပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့…။
ယူအက်စ်ကတော့.. အာမခံကို ဆဲလ်ဖုံးဝယ်တုံး တခါထဲမေးပြီး.. ၀ယ်ခိုင်းတယ်..။
မြန်မာဈေးကွက်နဲ့ ညှိပြီးလေ့လာလို့ရအောင်.. လင့်ခ်လေးတွေပေးလိုက်တယ်..။
တပ်ဘလက် တစ်လုံးလောက် ထပ်ဝယ်ချင်တယ် ဗျာ
တရုတ် က လာတဲ့ ၊ မန်းတလေး မှာ ကုမ္ပဏီ နဲ့ အာမခံ ၆ လ ပေးတဲ့
တပ်ဘလက် ကို ဝယ်လိုက်တာ ၊ ၁၆၅၀၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်
အင်တာနက် သုံးဖို့ ခက်နေတယ် ၊ တပ်ရှ် က စန်စေတစ် သိပ်မဖြစ်ဘူး ၊ တော်တော်ကြီး ကို အားစိုက်ရတယ်
ကျန်တာတွေ တော့ သုံးရ အဆင်ပြေပါတယ် ၊ မောက်စ် နဲ့ ဆိုရင်ပေါ့
ကိုဘလက်စီကာ တို့ လို ၊ သိကျွမ်းနားလည်နေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ 
တပ်ဘလက် အမျိုးအစား တွေ နဲ့ ဈေးနှုန်းလေး တွေ
အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေ ကို
အသေးစိတ် တင်ပြပေးမယ် ဆိုရင်
အရမ်းကောင်းမှာပဲ လို့ မျှော်လင့်မိတယ်
တပ်ဘလက် အမျိုးအစား တွေက အများကြီးရှိပါတယ် ။
အဲ့ မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ။တော်တော်စုံတယ် အချက်အလက် တွေနဲ့ ပေါ်ပြထား ပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ် Acer ရဲ့ iconia တော်တော်မိုက်တယ်။multi touch ရတယ်
မျက်စိမှိတ်ပြီး iPhone နဲ့ iPad ၀ယ်ပစ်လိုက်…စိတ်ချမ်းသာတယ်…
(အင်း …ပန်းသီးအကြောင်းပြောရင် အနီကတ်ထိမယ် သိသိနဲ့…)
သူ့ အိုင်ဖုန်းကို ရန်ကုန်ပင့်သွားတယ်…(အလည်ပြန်တုန်း..)
(110V + 220V)/2 = 165V လောက်ရှိတဲ့ မီးအားကို ထလန်စဖော်မာ မခံပဲ…
မီးအားပြတဲ့ ဗိုလ့်မီတာလေးက ဟိုဘက်အိမ်က ရေမောင်းလိုက် လှိုင်းကြက်ခွပ်ကလေးထလိုက်….
သည်ဘက်အိမ်က မော်တာလည်လိုက် ..rock သီချင်းဖွင့်ထားတဲ့ ဒက်စီဘယ်လ် မီတာလေးလို .လူးလိုက်နဲ့ ….
အိုင်ဖုန်းခဗျာ ..၂ညအိပ် ၃ရက်အတွင်း ..ကိစ္စချောပါလေရောဗျာ…
သည်ပြန်လာတော့ ၀ရန်တီ ပိရိရက် အတွင်းဖြစ်တာဆိုတော့ …
(ယူဇာ ကိုလည်း မီးအား အတင်အချလုပ်ပြီး တမင်ဖျက်တာ မဟုတ်ဟု ယုံကြည်စွာဖြင့်..)
နောက်တစ်ဦးကတော့ သဂျီးပြောသလို အိုင်ဖုန်းကို မျက်နှာသစ်ရင်း ရေတိုက်လိုက်မိတာ …
သူ့ကျတော့ အာမခံလုပ်ထားလို့ ..ငွေလေး မစို့မပို့ထပ်ဆောင်းပေးလိုက်တာနဲ့